Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Ixesha elitsha kuKhuseleko loKhenketho lwaseLatin American
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseColombia zokuPhula • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
UMongameli we-World Tourism Network uMongameli uGqirha Peter Tarlow ebesisithethi esiphambili kwiNgqungquthela yoKhuseleko nezoKhuseleko yamaPolisa kuZwelonke eColombia eColombia.
Nge-14 ka-Okthobha i-15, amaPolisa oKhenketho kuZwelonke aseColombia angenise ixesha elitsha lokhuseleko lwezokhenketho kunye nomntu "ICongreso de Seguridad Turístic”(INkomfa yoKhuseleko noKhuseleko).
Bamalunga namakhulu amabini abantu abazimase le nkomfa ngobuqu kunye nabantu abamalunga nama-2,000 XNUMX ababekho kulo lonke elaseLatin America.
Kule nkomfa bekukho izithethi ezivela eColombia nakwamanye amazwe akuLatin America kunye noGqirha Peter Tarlow, owayemele iMelika.
I-Colombia bekukudala iyinkokeli kubupolisa kwezokhenketho. Ngaphantsi kolwalathiso lobulumko lukaCoronel Jhon (hayi oluphosakeleyo) uHarvey Alzate Duque, iColombia iye yaba yinkokeli yaseLatin America kwicandelo lokhuseleko lwezokhenketho. Olu gxininiso kukhuseleko lokhuselo nokhuselo luguqule isimo esibi sangaphambili, kwaye namhlanje iColombia iyinkokeli kukhenketho lwaseLatin America.
Umsitho uvulwe nguGeneral Jorge Luis Vargas, ophethe umkhosi wamapolisa waseColombia. Izithethi zamanye amazwe zazingezi nje kuphela kuLatin America kuphela kodwa zivela naseFrance naseSpain. Imixholo yezithethi ibisukela kwindlela ukhuseleko lokhenketho kunye nokugcinwa kokhuseleko kwezokhenketho kuyeyona nto iphambili kule minyaka ingu-Covid-19 yobhubhane kwimiba yokhuseleko lwe-cyber kunye nokukhuseleka. Xa ebuzwa ngokubaluleka kokhuseleko kwezokhenketho, uTarlow waphawula ukuba "kwiminyaka elishumi eyadlulayo, iColombia yayiyindawo eyahlukileyo kakhulu" UTarlow uqhubeke ngokuthi nangona kumashumi eminyaka adlulileyo abatyeleli baseColombia babesoyika ukuphuma ingakumbi xa sele kumnyama, loo meko ayisekho ityala. UTarlow uqaphele ukuba namhlanje ngenxa yamawakawaka azinikeleyo kwaye aqeqeshwe ngokukodwa ngamapolisa ezokhenketho, iindwendwe ziyakwazi ukonwabela iColombia zisazi ukuba ekuphela komngcipheko abaza kujongana nawo kukuba bangafuni ukuhamba.
UGqr Peter Tarlow, iNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi
Izithethi zenkomfa zadumisa ngazwi-nye le nkomfa kwaye zaqaphela ukubaluleka kokuba nenkomfa yolwimi yeSpanish kulo lonke elaseLatin America. Umzekelo, uJuan Fabián Olmos, othe ngaphambi kokuba athathe umhlala phantsi kwi-Cordoba Argentina kwezobupolisa kwezokhenketho, wawahalalisela amapolisa aseColombia ngomsebenzi obabazekayo awenzileyo ekwakheni indawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo yeendwendwe ezivela kwihlabathi liphela. UBrigadier General Minoru Matsunaga wase Dominican Republic uthethe ngendlela iPolitur (ngokudibanisa amapolisa kunye nomkhosi wokhuselo nokhuselo lomkhosi) waba luphawu lwentengiso kukhuseleko lokhenketho kulo lonke ingingqi.
UJuan Pablo Cubides olungelelanisa iiprojekthi zokhuselo lokhenketho kwiColombia yonke uqaphele ukuba iColombia lilizwe elibona ukhuseleko kwezokhenketho njengenxalenye yokubuk 'iindwendwe. UCubides uqaphele ukuba amagosa asebupoliseni angaphezulu kweearhente zomthetho, kodwa abameli belizwe labo, kwaye ngenxa yoko ukhenketho lobupolisa luyinxalenye ebalulekileyo yophuhliso loqoqosho lwesizwe. Ezinye izithethi ezaziwayo zazibandakanya uManuel Flores osuka eMexico. UFlores ngowokuqala waseLatin American ukuba anikwe iwonga elidumileyo kwiNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi IHero lezoKhenketho ibhaso, kunye no-Oscar Blacido Caballero, womyalelo wasemazantsi ePeru obandakanya isixeko esibalulekileyo sezokhenketho eCuzco kunye ne-Machu Pichu edume kwihlabathi liphela. Le nkomfa ayijonganga kuphela imicimbi yalapha kodwa ikwajongana neengxaki zamanye amazwe ezinje ngokhuseleko lwe-cyber. UGqr.Juan Antonio Gómez, wase-Spain unikezele ngolwazi olutsha kwisoyikiso sokuhlaselwa kwe-cyber kwakhona kushishino lokhenketho lwehlabathi.
Inkomfa iphele nge-15 ka-Okthobhath ngokucula ii-anthem zaseColombia nezamapolisa kunye nokuzimisela ukusebenzisa izifundo esizifunde kuMbindi nakuMzantsi Merika.
Olunye ulwazi malunga Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi cofa apha.